XASAASI: Muuse Biixi Oo Weerar Afka Ah Ku Qaadey Golaha Wakiilada Somaliland Iyo Gudoomiyahooda Cirro, Isagoona……….. * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated Jul 7, 2017
Muuse Biixi Abdi Gudoomiyaha Xisbiga Taladda Somaliland haya ee Kulmiye, isla markaana ah musharaxa xilka madaxweynenimo ee isla xisbigaasi ayaa waxaa uu aad u dhaliiley golaha wakiilada iyo gudoomiyahooda CIro.
Isagoo ka hadlayey munaasab lagu daahfurayey bixinta kaararka codbixinta Somaliland ee gobalka Togdheer ayuu sheegey in Golaha wakiilada Somaliland ay ku guuldareysteen in ay dadkan iyo dalkan wax badan u qabtaan.
“ Run ahaantii wax qabadka golaha wakiilada oo ah awooda ugu balaaran ee dalka aad ayeey u liidataa, waxaana midaa ugu wacan waa hogaan jilicsanaanta gudoomiyahooda Cirrio” ayuu yiri Muuse Biixi.
“Cirro oo aad arkeysan sida uu ugu fashilmey siyaasada u dejinta iyo dardaran gelinta howlaha golaha wakiiladda Somaliland ayaa doonaya in dalkan uu madaxweyne ka noqdo, marka adinkaan idin weydiiyee qof sidaa u hogaan jilicsan ma ku aamini karnaa masiirka umadan” ayuu sii raaciyey Muuse Biiixi.
Kulmiye iyo Waddani oo ay gudoomiyeyaal iyo musharaxiinba ka yihiin Muuse Biixi iyo Cirro ayaa ah labada xisbi ee ugu tonka weyn isla markaana la filan karayo in hardanka ugu badan ee dhinaca doorashadda ah in uu dhex mari doono.